घर » केटी खेल » जोडाहरू संग दिदीले विश्राम
खेल जानकारी: जोडाहरू संग दिदीले विश्राम
विवरण: दिदीले पनि अन्वेषक अब उनको प्यारा सानो भाइ र बहिनी एक Babysitter छ। त्यो यति तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उनको आमाबाबुले उनको तिनीहरूलाई बस्नुहुन्थ्यो र तिनीहरूको हेरविचार गर्न अनुमति जब त्यो धेरै खुसी छ। आज त्यो दिन हो र त्यो तपाईं उनको लिनुभएको मदत गर्न चाहनुहुन्छ
खेल्नु: 395,583 ट्याग: दिदीले खेल
दिदीले समुद्र तट अप पोशाक
यो गर्मी को एक सुन्दर घमाइलो दिन हो र दिदीले एक सूर्य स्नान लागि समुद्र तट रहेको छ। सधैं जस्तै त्यो त यहाँ उनको सबै भन्दा राम्रो हेर्न चाहन्छ जहाँ तपाईं बच्चाहरु सहभागी सक्छ। दिदीले पछि समाप्त समुद्रीतट एक गर्म दिन को लागि सही outfit छान्न र क्लिक मदत
दिदीले डिएगो उद्धार
डिएगो जंगल राक्षस मा पक्रेको थियो। बाटो मा सबै राक्षस नष्ट गर्न सहयोग दिदीले डिएगो उद्धार, प्रत्येक राक्षस मार्ने र स्कोर प्राप्त गरेपछि सबै वस्तुहरू सङ्कलन गरौं।
दिदीले कुकुर सुरक्षित
दिदीले पनि प्लेटफर्ममा फँस छ जो आफ्नो कुकुर सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। तपाईंको पिल्ला प्राप्त गर्न दिदीले पनि हड्डी लिन बनाउन र अवरोध पार गर्न एक मार्ग पहिल्याउन
दिदीले ठूलो साहसिक
दिदीले र जूता आफ्नो मिशन पूरा गर्न नीलो रत्न सङ्कलन गर्न ठूलो साहसिक छन्। त्यहाँ पासो र हत्या दुवै दिदीले र जूता प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर बाटोमा घातक जीव हो। दिदीले र जूता पासो जोगिन मदत, सबै प्राणीहरू हत्या
दिदीले र डिएगो क्रिसमस उपहार
यो दुई खेलाडी खेल हो। क्रिसमस मा, दिदीले र डिएगो childs गर्न दिन क्रिसमस उपहार संकलित। तपाईं र तपाईंको मित्र यो खेल सँगै खेल्छन्। तपाईं डिएगो, कुञ्जीहरू नियन्त्रण गर्न बाँण कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो मित्र प्रयोग ए, डब्ल्यू, एस, डी दिदीले नियन्त्रण गर्न
दिदीले हेरविचार बच्चा गोही
आज दिदीले एक स्वयंसेवक रूपमा चिडियाखाना रहेको छ, उनको काम एक बच्चा गोही हेरचाह गर्न छ। बच्चालाई गोही तपाईं केहि गर्न आवश्यक हुनेछ, तपाईं सही प्रतिमा चयन गर्न एउटा सानो खेल पूरा गर्न आवश्यक छ। तपाईं बच्चा गोही खुवाउने हुनेछ, लिन
आफ्नो मनपर्ने दिदीले सवारी र स्तर finih फूल सङ्कलन। प्रत्येक स्तर पूरा गर्न लक्ष्य संग तोकिएको छ। यो अवरोध हेर्नुहोस् र ध्यानपूर्वक ड्राइव। रमाइलो गर!
दिदीले पाल्तु जनावर र हेरविचार खेल
तपाईं उनको बाँदर जूता बाहेक दिदीले तीन थप पाल्तु जनावर र छ भनेर थाह थियो? त्यो एक प्यारा बिरालो, एक अनुकूल पिल्ला र एक प्यारा लोखर्के छ। तर दिदीले कहिलेकाहीं धेरै यात्रा र उनको सानो फ्लफी मित्रहरुलाई पर्याप्त ध्यान गर्न सक्दैन। तपाईं के हेरविचार गर्नेछन्
Spongebob पालतू पशु चिकित्सक चिकित्सक
Winx क्लब खेल: मेरो परी पत्रु
Doraemon अनि Nobita बदलयो
Doraemon अनि Nobita बदलयो। ह्यान्डल गर्न माउस प्रयोग गर्नुहोस्। उहाँले बोर्ड मा आफ्नो फिर्ता गरिएका गर्दा वर्ग मा Nobita बदला Jyian र Suneo मदत। तपाईं शिक्षक ध्यान छ!
दिदीले प्रिंस उद्धार
बरफ राजकुमारी को Snowy वन उद्धार र सुरक्षित गर्न एक यात्रामा दिदीले र उनको मित्र हुनुहोस्। दिदीले विगतका बर्फीले महासागर, बरफ हिल्स माध्यम ले, गुफा भित्र, र राजकुमारी सुरक्षित गर्न टावर प्राप्त गर्न!